Jadeecada oo ku faafeysa bariga Bakool
Jadeecada oo ku faafeysa bariga Bakool
Photo | Keydka sawirrada/Khadar Xareed/Ergo
(ERGO) - Cudurka jadeecada ayaa soo ritay carruur iyo dad waaweyn oo ku sugan deegaanka Quracjoome oo 120 km u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Cudurka ayaa ku faafaya lix tuulo oo hoos taga deegaankaas oo dhammaantood aan lahayn xarumo caafimaad.
Dr. Maxamed Kaahiye Maxamed oo booqday tuulooyinka Fiktar, Ceel-kuusow, Dhagaxtuur, Buur gaabo,Ceel meged iyo Cagay ayaa isagoo ku sugan Quracjoome wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay in uu soo arkay 183 qof oo la il-daran jadeecada oo guryaha lagu hayo, qaarkoodna ay xaaladdoodu liidato. Tan iyo bishii Jannaayo oo cudurka uu billowday wuxuu sheegay inay u dhinteen 31 qof.
Isxaaq Maxamed Axmed wiil uu dhalay oo jiray lix bil ayaa koowdii bishan jadeecada ugu dhintay Fiktar. Weriyaha Ergo ee Baydhabo oo telefoonka ku wareystay ayuu u sheegay in wiilka korkiisa ay nabro kasoo baxeen, qandho badan oo aan kala joogsi lahayna uu ku arkay, laakiin uu waayay xarun caafimaad oo uu geeyo wiilkiisa oo xanuunsanaa in ka badan saddex toddobaad.
Mid ka mid ah kiisaska ugu daran ee jadeecada wuxuu haystaa qoyska Farxiyo Ibraahim Xasan oo ah hooyo 19 jir ah oo jadeecada ay hayso iyada iyo labo wiil oo ay dhashay oo mid ka mid ah oo afar toddobaad jira ay umul kula jirto. “Waxba ma laqi karto, mana hadli karto, nafta unbaa isaga jirta wax aan u qaban karnana malaha. ” ayay tiri Ruqiyo Cabdi Suubow oo ah eeddadeed oo ku haysa guri ku yaalla Quracjoome.
Ceelbarde oo ay ku taallo xarun yar oo caafimaad oo ah tan ugu dhow waxay Quracjoome u jirtaa 90 km.
Dr. Maxamed ayaa sheegay in dadka la ildaran jadeecada ay yihiin kuwo aan weligood la tallaalin.
Cabdifataax Sheekh Maxamed oo ah guddoomiyaha maamulka Quracjoome ayaa Raadiyo Ergo khadka telefoonka ugu sheegay inay ka sii dareyso xaaladda bukaannada, ayna ka cabsanayaan inuu cudurka soo rito bukaanno hor leh. Hay’adaha samafalka ayuu ka codsaday inay dadkaas gaarsiiyaan kaalmo caafimaad oo degdeg ah.